Uye wakhangela uCytomel - aasraw
/Iziphumo zophando ze "Cytomel"
isikhundla 12 / 23 / 2017 阿斯劳
ukuhlawula ibhanki ye-blog 1.Yintoni iCytomel / T3? 2.Isebenza njani iCytomel? I-3.Cytomel yokuLawula ukuPhathwa kwe4.Iziphumo ze-Cytomel 5.Cytomel i-6. Imiphumo yeCytomel 7.Cytomel / T3 vs Levothyroxine / T4 1. Yintoni iCytomel / T3? I-Cytomel yigama eliqhelekileyo elinxulumene negama lomenzi we-hormone ye-thyroid i-Liyronronine Sodium. Le ngxelo epheleleyo ye-thyroid eyenziwa ngokwemvelo [...]
imveliso 12 / 22 / 2017 阿斯劳
isikhundla 07 / 18 / 2019 阿斯劳